Indawo kaPatak;Hvar, iflethi okanye indlu ekwicomplex - I-Airbnb
Indawo kaPatak;Hvar, iflethi okanye indlu ekwicomplex
Ukuba ufuna ukuzonwabisa kuwo onke amacala eHvar yeyona ndlela ifanelekileyo.
Ufuna uxolo kunye nokufunda incwadi oyithandayo kunye neendawo ezintle eziselwandle. Uza kuthatha nje ipati emfutshane uhamba ngeenyawo ukuya eHula Hula kunye nepati. Injongo yethu kukugqitha koko besikulindele
Indawo kaPatak ikunika ubuhle obukhethekileyo, ububele kunye nendawo yokuba phakathi kwazo zonke izinto ezenziwayo, amatheko kwelinye icala ukuze ube noxolo lwengqondo uze wonwabele indawo entle esuka kwibhalkhoni yakho, iilwandle kunye nendalo entle.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ineendawo ezintle onokuzinqwenela. Unelanga kwibhalkhoni ukususela ekuseni ukuya kutsho ekutshoneni kwelanga. Kuyamangalisa nyhani. Ungalala kunye neengcango zivulekile kwaye bekuzolile kwaye kuthule isandi nje sesikhephe esidlulayo. Ukuba ufuna ubunewunewu awuzukuyifumana apha, kodwa ngamanye amaxesha kwanele ukuhlala kwibhalkhoni uze wonwabele :)
Kuthatha nje imizuzu eyi-15 ukuya kwindawo entle ehamba ngaselunxwemeni lwamanzi ukuya embindini wedolophu. Kwelinye icala iilwandle ziphantsi kwendlu kunye neebhari zaselwandle (iHula Hula kunye neFalco) kunye nezinye izinto ezininzi zokuzonwabisa.
Isuphamakethe i-100m ukusuka endlwini kunye nendawo yepitsa engaphezulu kwevenkile enkulu. Unevenkile yokutyela iAgava esesitratweni ngentla kunye neziko ledinala kwizindlu eziyi-3 ezikude.
4.58 out of 5 stars from 118 reviews
4.58 · Izimvo eziyi-118
Ubumelwane yeyona ndawo yokuhlala kweyona ndawo ilungileyo yeHvar, phambi kwendlu yindlela enye yesitrato ngoko ke awuzukufumana naluphi na uhlobo lwezothutho. Ingxolo yabamelwane kunye neeklabhu ebusuku akukho nto ibonakalayo. Ingxolo kuphela onokuthi uyive ivela kwiklabhu yolwandle yaseHula Hula ngexesha eliphakamileyo ukusuka ngentsimbi yesi-5 ukuya kweyesi-8 ngokuhlwa, kodwa ayingxoli ngenene, iyayonwabisa undwendwe oludala njengayo kuba lixesha lokutshona kwelanga kwaye lixesha elifanelekileyo lokuba kwibalcony ngeglasi yeglasi. umdiliya.
Izimvo eziyi-1 139
Kuxhomekeke kuthi kundwendwe ukuba lufuna ukudibana nathi kwaye sifumanise ukuba siyakuvuyela ukuchitha ixesha kunye nabo ukuba banohlobo olungakumbi lwabantu ukuba baphumla kwaye bandishiye bodwa asibanyanzelisi ukuba bahlale apho...